Apple wuxuu sharxayaa sababta iMessage aysan u gaarin Android | Wararka IPhone
Apple wuxuu sharxayaa sababta iMessage uusan uga dhigin Android
Paul Aparicio | | Wararka IPhone
Kahor intaan laqaban qodobka muhiimka ah ee bilawday WWDC 2016 iyo sida sanadkasta, waxaa la faafiyey kutiri kuteen ku saabsan waxa lagu soo bandhigi doono munaasabada. Mid ka mid ah xantaas ayaa sheegatay in Apple ay soo bandhigi doonto iMessage ee Android, kaas oo u oggolaan lahaa dadka isticmaala Android inay isticmaalaan iMessage iyo macruufka isticmaala si ay u isticmaalaan arjiga farriimaha asalka ah ee isticmaala badan. Muhiimadda ayaa dhammaatay mana jirin wax calaamado ah noocaas.
iMessage, sida caadiyan loo yaqaan inkasta oo dhab ahaan loogu yeero kaliya Fariimaha, waa mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee laga isticmaalo Mareykanka. Taasi waa mid ka mid ah sababaha macruufka 10 waxay ku qaadatay boodbood weyn marka laga hadlayo howlaha laakiin, isla waqtigaas, sidoo kale waa sababta ay ugu muuqato inaysan waligeed gaari doonin Android. Sidan ayuu Walt Mossberg u daabacay (qarka u saaran), oo la hadlay "hawl wadeen Apple ah."
Waxaan horeyba u ognahay sababta iMessage aysan u imaan doonin Android
Marka hore, ayuu yiri, Apple waxay tixgelineysaa saldhigeeda isticmaale ee 1.000 bilyan aalado firfircoon si ay u bixiso xog uruurin ballaaran oo ku filan wax kasta oo suurtagal ah AI barashada ay shirkaddu ku shaqeyn karto. Marka labaad, haysashada madal fariin sare leh oo kaliya ka shaqeysa aaladaha Apple waxay sare u qaadi kartaa iibinta aaladahaas, aasaaska shirkaddu u leeyahay aasaaska (iyo guuleysiga) sannado.
Laakiin, sidaan ku sheegnay munaasabado kala duwan, albaabku si buuxda uma xirna. Laga bilaabo iOS 10, iMessage, sida codsiyada kale ee Apple, waxay noqon doontaa mid furfuran waxayna u oggolaan doontaa horumariyeyaasha inay la shaqeeyaan SDK oo ay ku dari karaan shaqooyinkooda iyo kordhintooda. iMessage sidaas ayey ku noqon doontaa barxad, sidaa darteed waa la filayaa (in kastoo aysan u muuqan inay aad u dhowdahay) in goor dhow ama goor dambe codsiyada dhinac saddexaad ay ka muuqan doonaan App Store. Haddii Apple uusan si uun u xakameynin, suurtagalnimada barnaamijyadan saddexaad ee ka dhigaya Google Play lama diidi karo, laakiin ma noqonayso isla barnaamijkii. Asal ahaan, la sheekaysiga codsi aan rasmi ahayn oo loo yaqaan 'iMessage' oo loogu talagalay Android iyo iOS 10 waxay la mid noqon doontaa la sheekaysiga iMessage inta udhaxeysa noocyada macruufka 10 iyo macruufka 8: nooca ugu dambeeya wuxuu leeyahay qaabab badan oo cusub, halka midka macruufka 8 uusan wali lahayn wax horumarka yar ee ay ku sameeyeen iOS 9.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waqtigan xaadirka ah waxaan kaliya xaqiijinay oo ah: iMessage for Android run maahan mana u muuqato inay noqon doonto, ugu yaraan muddada dhow iyo codsi rasmi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Apple wuxuu sharxayaa sababta iMessage uusan uga dhigin Android
BlackBerry wuxuu yiri isla. Waxay lahaayeen madal fariin ugufiican. Waxay filayeen dadku inay qaataan aaladooda adeegan. Laakiin dadku waxay doorbideen adeeg xun sida WhatsApp laba sababood:
- waxay doorbideen inay doortaan aalado fiican iyo
- adeeg fariin xumo laakiin in dhammaan dadka aad la xiriirtay ay lahaayeen.
Markay tan shaqeyn weyday way fureen, laakiin waa goor dambe. WhatsApp horay ayey u lahayd macaamiisha. Oo waxay ku iibisay Facebook wax ka badan inta qiimaha leh ee RIM.
Apple sidoo kale ma shaqeyn doonto. Dadku waxay doortaan Apple maxaa yeelay waxay jecel yihiin iPhone-ka, maahan iMessage.
iMessage si liidata ayay u shaqaysaa oo gaabis ah. Wadahadalkeygu way nuqulaan mana u isticmaalaan 98% xiriiradayagu. Marka waxaan isticmaalaa WhatsApp. Taas ayaa xun, laakiin qof kastaa wuu hayaa (mahadnaqa xaqiiqda ah inuu ka shaqeeyo aaladaha oo dhan) welina wuu ka fiican yahay iMessage.
Hadday caqli leeyihiin, waxay u sii deyn lahaayeen iMessage iyo FaceTime dhammaan nidaamyada hawlgalka (moobilka iyo desktop-ka), waxayna hagaajin doonaan cayayaanka 10.000.000.000 ee ay haystaan.
100% waxay ku raacsan yihiin faallooyinkii hore
IH10snow's iOS 8 Jailbreak ayaa lasoo bandhigay
IOS 10 waxay ka tagaysaa meel bannaan oo bilaash ah marka loo eego kuwii ka horreeyay